Orinasa fantsom-pandrosoana manokana - Mpanamboatra andian-tsarimihetsika fantsona manokana any Sina
Ny fantsom-panafody HDPE dia mateza sy azo antoka, ampiasaina amin'ny injenieran'ny etona an-tanàn-dehibe. ◎ Fiainana lava ampiasaina azo antoka mandritra ny 50 taona mahery. ◎ Fahalefahana Ny pipa PE dia manana elongation amin'ny fihenan'ny 500%. Tsy ho vaky izy io noho ny fanovana isan-karazany any ambanin'ny tany toa ny fidinana an-tany sy ny horohoron-tany, ary manana fiarovana azo antoka. Boribory boribory (R≥15D), tsy mila tonon-kiho, izay mety amin'ny fananganana. Resistance Fanoherana mangatsiaka Ny coefficient fiparitahan'ny tsipika fantsom-pandrefesana PE dia 1.5X10-4mm / m ...
Sodina ambanin'ny tany HDPE mine mine
Ny retardant / antistatic amin'ny afo Ny singa antistatic sy flame retardant an'ny fantsona polyethylene ampiasaina amin'ny toeram-pitrandrahana arintany dia zaraina mitovy amin'ny vatan'ny fantsona, noho izany ny famantarana ny fampisehoana antistatika sy ny lelafo dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fotoana fampiasana ela. Ny fananana antistatic sy flame retardant dia mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly ary mety amin'ny toerana manokana misy ny afo mandoro sy mipoaka any ambanin'ny tany. Maivana / mora apetraka ny hakitroky ny fantsona polyethylene ampiasaina amin'ny co ...
Fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano ambanin'ny tany sy fantsona plastika manokana ho an'ny fantsakana lalina
Ny fantson-drano amin'ny plastika dia manana ny mampiavaka ny lanjany maivana, ny fanoherana ny harafesina matanjaka, ny faharetana tsara, ny vidiny ambany, sns. Amin'ny indostrian'ny fantsakana rano any amin'ny firenena vahiny, indrindra any amin'ny firenena mandroso, mihoatra ny 80% ny fantson-drano amin'ny plastika no ampiasaina. Ny firoboroboan'ny ho avy eo amin'ny sehatry ny fantsakana rano dia ny fampiasana fitaovana vaovao hamoronana fantsakana hamahana ny olan'ny fahasimbana sy ny scaling, indrindra ny olan'ny famonoana rano amin'ny faritry ny sira be. PVC-U plastika plastika manana ny ...